RN4 - MAEVATANANA : Olona roa maty tsy tra-drano navadiky ny kamiao
Manao tohivakana tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana mitranga amin’iny lalam-pirenena miazo an’i Mahajanga iny. 4 mars 2014
Amin’ny ankapobeny dia noho ny tandrevaka ataon’ny mpamily na ny tsy fahatomombanana eo amin’ilay fiara no antony mahatonga izany.
Ny andron’ny zoma teo tokony ho tamin’ny 3 ora maraina dia fiara kamiao iray no niharan’ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tamin’ity lalam-pirenena fahefatra iny. Mpandeha roa no namoy ny ainy tamin’izany ary olona maro ihany koa no fantatra fa naratra mafy. Tao amin’ny Fokontany Namokomita, Kaominina Mahatsinjo ao anatin’ny Distrikan’i Maevatanàna no nisehoan’ny loza.
Voalaza fa mpitatitra entana ity kamiao ity no nitondra olona maromaro ary saika avy any Antananarivo handeha hidina ho any Mahajanga izy izao niharan-doza izao. Araka ny loharanom-baovao dia vokatry ny fandehanana mafy no isany nitarika ny loza. Tsy voafehin’ilay mpamily intsony mantsy ny familiana noho ny hafangainam-pandehany izay ka nampivadika ambony ambany azy. Olona roa tao anatin’ity farany no fantatra fa maty tsy tra-drano vokatry ny loza ary nisy tao amin’ireo mpandeha tao anatiny ihany koa no voalaza fa naratra mafy.
Fotoana fohy taorian’ny nitrangan’ny loza dia tonga teny an-toerana nijery ny zava-misy ny mpitandro filaminana. Efa nalefa notsaboina ireo naratra ary efa natolotra ny fianakaviany ihany koa ireo razana taorian’ny fizahana natao. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana hataon’ny Zandary.